I-Apple ijolise kwimizamo yokuthinta i-ID kwiscreen | IPhone iindaba
I-Apple ijolise kwimizamo yokuthinta i-ID kwiscreen
Inkampani yaseCupertino iyaqhubeka ukuthandabuza ukubandakanya itekhnoloji yokuchonga i-biometric kwiscreen, into ethi nangona ezinye iinkampani ziphuhlise ngendlela engacacanga, kukho ezinye ezinje ngeHuawei okanye iXiaomi ezisebenzisa ezi nkqubo kakuhle kwiifowuni eziphathwayo.
Kungenxa yoko le nto iApple, engafuni kushiyeka ngasemva, ifunda ukumilisela i-ID yescreen ekhatshwa yi-ID yobuso yangoku. Uthotho lwamalungelo awodwa omenzi wechiza ahamba nale mbono yokuba inkampani yaseCupertino ayifuni ukuyishiya ngokuqinisekileyo i-ID yokuChukumisa kodwa ... ayikashiywa lixesha kuyo? Ukuphunyezwa okutsha akukhathazi.
Siqala ngesilumkiso, ukubandakanywa kwale teknoloji kugwetyelwe kwaphela ukufika kwe-iPhone 13, kunokuba kulindelwe i-iPhone 14 okanye igama iApple ethatha isigqibo sokunika isixhobo sayo ngo-2022. Ngale ndlela, uphawu usebenze kwilungelo elilodwa lomenzi elibizwa ngokuba "ngumboniso wesixhobo se-elektroniki somboniso wokubonisa", njengoko kuchaziwe Apple Insider. Kwithiyori, ukuthunyelwa kwelungelo elilodwa lomenzi kugxile ekubonakaleni kokuthathwa kweminwe yethu xa sichukumisa indawo ethile yesikrini, Ngefomula elula kakhulu, yiyo loo nto uninzi lwabafundi bescreen seminwe besenza, thatha isithombe esisondeleyo somnwe wethu.
I-ID yobuso, wakuba uyiqhelile, yitekhnoloji emangalisa ngokwenene. Nangona kunjalo, ukufika kwesi sifo kunye nokusetyenziswa kwesigqubuthelo kusinyanzele ukuba sibuyele ngqo kwi-iPhone 5 kwangoko, kuba i-ID yesazisi ayifikanga de kwaba zii-iPhone 5s. Sithetha ngetekhnoloji yakudala kodwa engafakwanga yokufaka ikhowudi ukuvula isixhobo, into ethembekileyo iyadika uninzi lwethu. Ngelixa iimaski zisiya zinyamalala ngokuthe ngcembe, sinokuqiniseka ukuba iApple ekugqibeleni iyaphumeza i-ID yescreen esikrinini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple ijolise kwimizamo yokuthinta i-ID kwiscreen
I-Apple ipapasha i-beta yesine ye-iOS 15, i-iPadOS 15, i-watchOS 8 kunye neMacOS Monterey
Akukho nto ivula ii-headphone ze-TWS, iNdlebe (1) ngexabiso lokuwisa